ဒူးနာ ၍ ဆေးခန်းပြသော်လည်း မသက်သာပဲ သဘာဝဆေးနည်းများ… - Tameelay
ဒူးနာ ၍ ဆေးခန်းပြသော်လည်း မသက်သာပဲ သဘာဝဆေးနည်းများ…
ဒူးနာ၍ ဆေးခန်းပြသော်လည်း မသက်သာပဲ သဘာဝဆေးနည်းများကို
တောင်းဆိုလာသူများအတွက် ဒူးနာဆေးနည်းများကို စုစည်း၍ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာအရောဂါများအတွက်
သက်ရင်းကြီးရွက်နှင့်လုံအောင်လိပ်ကာ( ၅ ) နာရီခန့် ပြုတ်၍တစ်နေ့သုံးလုံးစီ( ၅ ) ရက်ဆက်တိုက်စားပေးပါက
လဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာနာတာရှည်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါသည်။
အစွမ်းထက် သက်စောင့်ဆေးအားမှီဝဲကြပါကုန် ။ (ဝိစိတ္တရတနာမြေ)
(၂) ငါးကြင်းခေါင်းကို မကြာခဏ ဟင်းချက်စားခြင်းဖြင့် ဒူးနာရောဂါ၊
ဒူးခေါင်းကျီးပေါင်းရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်း ရှေးကဆေးကျမ်းများတွင် ဖတ်ရှုရ၍ လက်တွေ့စမ်းကြည့်ရာ ဒူးထဲမှ ကုန်ခမ်းနေသော
ရိုးတွင်းချဉ်ဆီများ အားပြန်လည်ပြည့်ဝလာ၍ တကယ်ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။ (တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး ဦးကြည်မြင့်လွင်)
(၃) ဆေးရုံ ၃လလောက်တက်ခဲ့ရတဲ့ အသိတစ်ယောက် ဒီနည်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်။ ၃ ပတ်လောက် ဒူးနာနေတဲ့ ကျနော့်ယောက္ခမလည်း ဒီနည်းနဲ့ပဲ ပျောက်သွားတယ်။
ဆေးနည်းကတော့ ဂျင်းတက်နဲ့ မြေဖြူခဲကို ရောထောင်းပြီး နာနေတဲ့ဒူးပေါ်ကို တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ ၃ ရက်အတွင်း သိသာလာမယ်။
တစ်ပတ်လောက်ဆိုပြီ ပျောက်ပြီ။ (ကိုယ်တွေ့တစ်ဦး)
(၄) ခွေးတောက်ရွက် လက်တစ်ဆုပ်ခန့်ကို ထုထောင်း၍ အရည်ညှစ်ယူကာ ၄င်းအရည်ဖြင့် သနပ်ခါးသွေးကာ ဒူးပေါ်ကို လိမ်းပေးပါ။
မနက်ရေချိုးပြီးတစ်ကြိမ်၊ ညအိပ်ခါနီးတစ်ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ တစ်ပတ်ခန့်လိမ်းပေးလျှင် ဒူးနာသက်သာပျောက်ကင်းစေမည်။ (Mg Naing)
(၅) ရှားစောင်းလက်ပပ် လတ်လတ်ဆတ်လတ်ကို ခူးယူ၍ အပေါ်အခွံကိုခွါပြီး အတွင်းသားဂျယ်လီကို ဇွန်းဖြင့်ခြစ်ယူ၍ ကျိုချက်ထားသော နွားနို့အအေးနှင့် သောက်ပါ။
၅ ရက်ခန့်သောက်လျှင် ဒူးနာသက်သာလာမည်။ (ဒို့မြန်မာဒေါ့ကွမ်း)
(၆) ဒူးနာ၊ ခါးနာပျေက်ကင်းစေမည့် သဘာဝဆေးနည်း
က။ သင်္ဘောသီးအစိမ်းတစ်လုံးကို ထိပ်ပိုင်းနေရာမှ ကြက်ဥတစ်လုံးစာခန့် ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါ။
အတွင်းမှ အစေ့များကိုလည်း မထုတ်ပဲ ထားပါ။
ခ။ ကြက်ဥကို ထည့်လိုက်ပါ။ (သဘာဝကြက်ဥ၊ တောကြဥ ဆိုလျှင် ပိုကောင်းပါသည်)
ဂ။ ပိုင်းဖြတ်ထားသည့် အပိုင်းဖြင့် ပြန်အုပ်လိုက်ပါ။ သူ့အစေးနှင့်သူ ပြန်ကပ်ပါသည်။ ပိုပြီး စိတ်ချချင်လျှင် ရွံ့ စေးများဖြင့် အုပ်ပေးထားနိုင်ပါသည်။
ဃ။ ၄င်းသင်္ဘောသီးကို မီးသွေးမီးဖိုထဲမှာ မီးဖုတ်ပေးပါ။ ပျော့အိပြီး အတွင်းမှ ကြက်ဥ ကျက်သွားသည့်အထိ ဖုတ်ပါ။
င။ ပြီးလျှင် အခွံကို ခွါချလိုက်ပြီး အတွင်းမှ ကြက်ဥကို စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်နဲ့ (၃)ကြိမ်ခန့် စားပေးပါက ဒူးနာ၊ ခါးနာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ)
(၇) သံပုရာသီးကို ထက်ခြမ်းပိုင်း၍ ၄င်းသံပုရာခြမ်းဖြင့် နာနေသည့်ဒူးပေါ်ကို အရည်များကုန်ခမ်းသည့်အထိ ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ
။ ပြီးလျှင် (ဆရာခို-အနာလိမ်းဆေး) သို့မဟုတ် ဒဏ်ကြေဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လိမ်းပေးပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့် အ၀တ်ပါးပါး၊
ပတ်တီးစီးထားပါ။ အထူးသဖြင့် ညအိပ်ခါနီး လိမ်းပေးလျှင် ပိုထိရောက်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ခန့်လိမ်းပေးလျှင် ဒူးနာပျောက်ကင်းစေပါမည်။ (စောနွဲ့ နေဆိုင်-ပူတာအို)
(၈) ဒူးနာသူများအတွက် ဆေးမြီးတို နောက်တနည်း
ခါးနာ ဒူးနာ သူများအတွက် မခက်ပါ ….
ဘဲဥကိုပွတ်နေသော ရေနွေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနစ်ခန့် ပြုတ်လိုက်ပြီး ဆယ်ယူလိုက်ပါ ၊ ဆယ်ယူလိုက်သည့် ဘဲဥကို ပန်းကန်လုံးထဲ့ကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါ စားကောင်းစေရန်
သကြားအနည်းငယ် သင်စားကောင်းစေလောက်သည့် အနေအထားသို့ ထည့်ပြီး ခေါက်စားလိုက်ပါ တခြားမည်သည်အရာမှ ရောစပ်ပြီး မစားရပါ ဘဲဥတလုံးကိုတော့ ကုန်အောင် စားရပါလိမ့်မည်။
တနေ့ ကို ဘဲဥတလုံးကို ကုန်အောင်စားရပါလိမ့်မည်
ထိုနည်းအတိုင်း နေ့စဉ် ဘဲဥတလုံးစီ စားသုံးရမည်၊ အနည်းဆုံး မိမိအသက်၏ တ၀က် အလုံးရေအထိ စားသုံးရမည်၊
( ဥပမာ ) အသက် ၄၀-နှစ်ရှိလျှင် အနည်းဆုံး ဘဲဥ အလုံးရေ (၂၀ ) စားသုံးရမည်၊
ဘဲဥစားသုံးခြင်းသည် လိုအပ်သော ခြင်ဆီဓာတ်အတွက် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြစ်ပါသည် ။
ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခြင်းဖြင့် ခါး-ဒူးတို့တွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ခန်းခြောက်ခြင်းကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ခါးနာ ဒူးနာများ
ဒူးနာ ခါးနာ အဆစ်မြစ်နာ ကိုက်ခဲ ဝေဒနာများ အတွက် သဘာဝဆေးနည်းများကို
“မှတ်စု” Page မှ စုစည်း၍ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒူးနာ ခါးနာ အဆစ်မြစ်နာဝေဒနာကို ခံစားနေသည့် မိတ်ဆွေများအားလုံး အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနိုင်ကြပါစေ။
ပြန်လည် Share ပေးခြင်းဖြင့် မျှဝေပေးကြပါဦး
ဒူးနာ၍ ဆေးခနျးပွသျောလညျး မသကျသာပဲ သဘာဝဆေးနညျးမြားကို
တောငျးဆိုလာသူမြားအတှကျ ဒူးနာဆေးနညျးမြားကို စုစညျး၍ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
(၁) လဖွေတျ လငေနျးလေးဘကျနာ ခါးနာ ဒူးနာအရောဂါမြားအတှကျ
သကျရငျးကွီးရှကျနှငျ့လုံအောငျလိပျကာ( ၅ ) နာရီခနျ့ ပွုတျ၍တဈနသေုံ့းလုံးစီ( ၅ ) ရကျဆကျတိုကျစားပေးပါက
လဖွတျ လငေနျးလေးဘကျနာ ခါးနာ ဒူးနာနာတာရှညျရောဂါမြား ပြောကျကငျးပါသညျ။
အစှမျးထကျ သကျစောငျ့ဆေးအားမှီဝဲကွပါကုနျ ။ (ဝိစိတ်တရတနာမွေ)
(၂) ငါးကွငျးခေါငျးကို မကွာခဏ ဟငျးခကျြစားခွငျးဖွငျ့ ဒူးနာရောဂါ၊
ဒူးခေါငျးကြီးပေါငျးရောဂါမြားကို ပြောကျကငျးစနေိုငျကွောငျး ရှေးကဆေးကမျြးမြားတှငျ ဖတျရှုရ၍ လကျတှစေ့မျးကွညျ့ရာ ဒူးထဲမှ ကုနျခမျးနသေော
ရိုးတှငျးခဉျြဆီမြား အားပွနျလညျပွညျ့ဝလာ၍ တကယျပြောကျကငျးခဲ့သညျ။ (တိုငျးရငျးဆေးဆရာကွီး ဦးကွညျမွငျ့လှငျ)
(၃) ဆေးရုံ ၃လလောကျတကျခဲ့ရတဲ့ အသိတဈယောကျ ဒီနညျးနဲ့ပြောကျသှားတယျ။ ၃ ပတျလောကျ ဒူးနာနတေဲ့ ကနြေျာ့ယောက်ခမလညျး ဒီနညျးနဲ့ပဲ ပြောကျသှားတယျ။
ဆေးနညျးကတော့ ဂငျြးတကျနဲ့ မွဖွေူခဲကို ရောထောငျးပွီး နာနတေဲ့ဒူးပျေါကို တဈနေ့ ၂ ကွိမျ လိမျးပေးပါ။ ၃ ရကျအတှငျး သိသာလာမယျ။
တဈပတျလောကျဆိုပွီ ပြောကျပွီ။ (ကိုယျတှတေ့ဈဦး)
(၄) ခှေးတောကျရှကျ လကျတဈဆုပျခနျ့ကို ထုထောငျး၍ အရညျညှဈယူကာ ၎င်းငျးအရညျဖွငျ့ သနပျခါးသှေးကာ ဒူးပျေါကို လိမျးပေးပါ။
မနကျရခြေိုးပွီးတဈကွိမျ၊ ညအိပျခါနီးတဈကွိမျ လိမျးပေးပါ။ တဈပတျခနျ့လိမျးပေးလြှငျ ဒူးနာသကျသာပြောကျကငျးစမေညျ။ (Mg Naing)
(၅) ရှားစောငျးလကျပပျ လတျလတျဆတျလတျကို ခူးယူ၍ အပျေါအခှံကိုခှါပွီး အတှငျးသားဂယျြလီကို ဇှနျးဖွငျ့ခွဈယူ၍ ကြိုခကျြထားသော နှားနို့အအေးနှငျ့ သောကျပါ။
၅ ရကျခနျ့သောကျလြှငျ ဒူးနာသကျသာလာမညျ။ (ဒို့မွနျမာဒေါ့ကှမျး)
(၆) ဒူးနာ၊ ခါးနာပကျြေကငျးစမေညျ့ သဘာဝဆေးနညျး
က။ သင်ျဘောသီးအစိမျးတဈလုံးကို ထိပျပိုငျးနရောမှ ကွကျဥတဈလုံးစာခနျ့ ပိုငျးဖွတျလိုကျပါ။
အတှငျးမှ အစမြေ့ားကိုလညျး မထုတျပဲ ထားပါ။
ခ။ ကွကျဥကို ထညျ့လိုကျပါ။ (သဘာဝကွကျဥ၊ တောကွဥ ဆိုလြှငျ ပိုကောငျးပါသညျ)
ဂ။ ပိုငျးဖွတျထားသညျ့ အပိုငျးဖွငျ့ ပွနျအုပျလိုကျပါ။ သူ့အစေးနှငျ့သူ ပွနျကပျပါသညျ။ ပိုပွီး စိတျခခြငျြလြှငျ ရှံ့စေးမြားဖွငျ့ အုပျပေးထားနိုငျပါသညျ။
ဃ။ ၎င်းငျးသင်ျဘောသီးကို မီးသှေးမီးဖိုထဲမှာ မီးဖုတျပေးပါ။ ပြော့အိပွီး အတှငျးမှ ကွကျဥ ကကျြသှားသညျ့အထိ ဖုတျပါ။
င။ ပွီးလြှငျ အခှံကို ခှါခလြိုကျပွီး အတှငျးမှ ကွကျဥကို စားရမှာဖွဈပါတယျ။
တဈပတျကို တဈကွိမျနဲ့ (၃)ကွိမျခနျ့ စားပေးပါက ဒူးနာ၊ ခါးနာပြောကျကငျးသှားပါလိမျ့မယျ။ (အစာလညျးဆေး၊ ဆေးလညျးအစာ)
(၇) သံပုရာသီးကို ထကျခွမျးပိုငျး၍ ၎င်းငျးသံပုရာခွမျးဖွငျ့ နာနသေညျ့ဒူးပျေါကို အရညျမြားကုနျခမျးသညျ့အထိ ညငျသာစှာ ပှတျတိုကျပေးပါ
။ ပွီးလြှငျ (ဆရာခို-အနာလိမျးဆေး) သို့မဟုတျ ဒဏျကွဆေေးတဈမြိုးမြိုးဖွငျ့ လိမျးပေးပွီး ၁၅ မိနဈခနျ့ အဝတျပါးပါး၊
ပတျတီးစီးထားပါ။ အထူးသဖွငျ့ ညအိပျခါနီး လိမျးပေးလြှငျ ပိုထိရောကျပါတယျ။ တဈပတျခနျ့လိမျးပေးလြှငျ ဒူးနာပြောကျကငျးစပေါမညျ။ (စောနှဲ့နဆေိုငျ-ပူတာအို)
(၈) ဒူးနာသူမြားအတှကျ ဆေးမွီးတို နောကျတနညျး
ခါးနာ ဒူးနာ သူမြားအတှကျ မခကျပါ ….
ဘဲဥကိုပှတျနသေော ရနှေေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနဈခနျ့ပွုတျလိုကျပွီး ဆယျယူလိုကျပါ ၊ ဆယျယူလိုကျသညျ့ ဘဲဥကို ပနျးကနျလုံးထဲ့ကို ဖောကျထညျ့လိုကျပါ စားကောငျးစရေနျ
သကွားအနညျးငယျ သငျစားကောငျးစလေောကျသညျ့ အနအေထားသို့ထညျ့ပွီး ခေါကျစားလိုကျပါ တခွားမညျသညျအရာမှ ရောစပျပွီး မစားရပါ ဘဲဥတလုံးကိုတော့ ကုနျအောငျ စားရပါလိမျ့မညျ။
တနကေို့ ဘဲဥတလုံးကို ကုနျအောငျစားရပါလိမျ့မညျ
ထိုနညျးအတိုငျး နစေ့ဉျ ဘဲဥတလုံးစီ စားသုံးရမညျ၊ အနညျးဆုံး မိမိအသကျ၏ တဝကျ အလုံးရအေထိ စားသုံးရမညျ၊
( ဥပမာ ) အသကျ ၄၀-နှဈရှိလြှငျ အနညျးဆုံး ဘဲဥ အလုံးရေ (၂၀ ) စားသုံးရမညျ၊
ထိုထကျ မြားမြားစားသုံးနိုငျလြှငျ ပိုကောငျးပါသညျ။
ဘဲဥစားသုံးခွငျးသညျ လိုအပျသော ခွငျဆီဓာတျအတှကျ ပွနျလညျဖွဈပျေါစရေနျဖွဈပါသညျ ။
ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ခါး-ဒူးတို့တှငျ ရိုးတှငျးခွငျဆီ ခနျးခွောကျခွငျးကို ပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးပွီး ခါးနာ ဒူးနာမြား
ဒူးနာ ခါးနာ အဆဈမွဈနာ ကိုကျခဲ ဝဒေနာမြား အတှကျ သဘာဝဆေးနညျးမြားကို
“မှတျစု” Page မှ စုစညျး၍ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ဒူးနာ ခါးနာ အဆဈမွဈနာဝဒေနာကို ခံစားနသေညျ့ မိတျဆှမြေားအားလုံး အမွနျဆုံးပြောကျကငျးနိုငျကွပါစေ။
ပွနျလညျ Share ပေးခွငျးဖွငျ့ မြှဝပေေးကွပါဦး
မောင်ကျာက်ကပ် ကောင်းစေရန် ( ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေး )
ကျောက်ကပ်တွင် ဖြစ်တတ်သော ပြဿနာများ ထိုကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်၏ အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်း ၊ ထိန်းညှိခြင်း စသော လုပ်ငန်း တာဝန်များကို တရံမလပ် ထမ်းဆောင် နေရသော ကျောက်ကပ်သည် တစ်ခါတစ်လေ တွင် နေမကောင်းခြင်း စသော ကိစ္စရပ်များနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ လစ်ဟင်းတတ်သည်။ ရဲဘော်ကြီးကျောက်ကပ် နေမကောင်းရခြင်း …
လိပ်ခေါင်း ရောဂါကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည့် အစားအစာများ.. ဖြစ်ပြီဆိုရင် ခံရတာ တော်တော်ဆိုးလို့ သိထားသင့်ပါတယ်
လိပ်ခေါင်း ရောဂါကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည့် အစားအစာများ လူအများစုက ပုံမှန်ဝမ်းချုပ်တတ်တဲ့အကျင့် ဒါမှမဟုတ် ခရီးသွားရာမှာ ၀မ်းအောင့်ထားတတ်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့် ၀မ်းသွားရင်း သွေးပါတာလို၊ လိပ်ခေါင်းအနည်းငယ် ထွက်တာလိုမျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ လိပ်ခေါင်းအမျိုးအစားအများစုကရက်အနည်းငယ်အတွင်း သူ့ဘာသာသူပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တချို့အစားအစာတွေက လိပ်ခေါင်းရောဂါကို ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ လိပ်ခေါင်းဖြစ်ခါစမှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အစားအစာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ …
ဒေါက်တာအောင်စိုးဝင်းပြောသော ရဲယိုအကြောင်းသိကောင်းစရာများ.. ရဲယိုကဆေးလား ?
ဒေါက်တာအောင်စိုးဝင်းပြောသောရဲယိုအကြောင်းသိကောင်းစရာများ မေး ရဲယိုကဆေးလား ? ဖြေ ရဲယိုသည်ဆေးမဟုတ်ပါ။ ဆေးထက်အဆင့်များစွာမြင့်မားပြီး သဘာဝအလေ့ကျပေါက် ရောက်သောအသီးတမျိုးပါ ။ မေး ရဲယိုသီးကိုဘာရောဂါမှမဖြစ်သေးခင် ကြိုတင်စားလို့ရပါသလား ? ဖြေ စားလို့ရပါတယ် ။ ထန်းလျက်နဲ့သော်၎င်း ၊ ပျားရည်နဲ့သော် ၄င်း ၊ ရောပြီးစားလို့ရပါတယ်။ အစေ့ တွေကိုမစားစေချင်ပါ …